Landela iiVenkile ezihlaziyiweyo zeVenkile yeApple ngokuSebenzisa isiQinisekiso seTrekhnoloji | Ndisuka mac
Landela iiVenkile ezihlaziyiweyo zeVenkile yeApple ngeNdlela yokuhlaziya
UJavier Porcar | | Apple Isitolo, Izaziso, Ezahlukeneyo
Kweli phepha sithethile nawe izihlandlo ezininzi malunga iimveliso ezihlaziyiweyo iyafumaneka kwiVenkile yeApple. Ziimveliso ezibuyile evenkileni ngenxa yeemeko ezahlukeneyo: sizamile imveliso kwaye asiyithandi, inemveliso encinci ukusilela okanye nayiphi na enye imeko. Ke ngoko, uninzi lweemveliso zeApple ziyafumaneka ukuze zithengiswe kwakhona, kunye nohlaziyo olufanelekileyo, ngesaphulelo esibalulekileyo. Umzekelo wokugqibela kukuthengisa kokugqibela Ukuhlaziywa kwe-2016 MacBook Pro, zombini nje iinyanga ezi-5 okanye ezi-6 emva kokuba ikhululwe okokuqala.
Kwiinyanga ezidlulileyo sifumene amaphepha abonisa isitokhwe semveliso kwiVenkile yeApple. Namhlanje sivelisa iphepha Hlaziya iTracker, que Isazisa xa imveliso besiyikhangela ivela kwiVenkile ethile yeApple. Asizukufumana mifanekiso mihle okanye oopopayi kweli phepha, kodwa lenza okungaphezulu kokufezekisa injongo yalo. Iyakwazi ukufumana nayiphi na into esiyifunayo. Ukusuka kwi-iPods ukuya kwi-Mac Pro, ngokusebenzisa izixhobo. Kodwa ukuba awuyifumani imveliso oyifunayo ngeli xesha okanye ukhetha ukulinda ukuze ufumane amaxabiso asezantsi, ngenisa imeyile yakho kwaye uya kufumana iindaba zemveliso ekuthethwa ngayo.
Umsebenzi ulula kakhulu. Kuqala sikhetha ilizwe apho sifuna ukwenza khona uphando. Apha ngezantsi kukho iindidi ezahlukeneyo zeemveliso ezihlaziyiweyo zeApple. Sinokuthi ukuba phantse zonke.
Ukhetho lokucoca uluncedo kakhulu. Khumbula ukuba iMac nganye inegama elithile, oko kukuthi, ukuba unomdla kwi-5- retina 27k yesikrini se-iMac nge-Intel Core i7, le modeli inereferensi yeGOSCAY / A. Ukujonga esi salathiso, siya kufumana iziphumo zethu.
Mhlawumbi ekuphela kophuculo endinokucebisa ngalo kubadali bayo kukuba bakwazi ukucoca ngeVenkile ethile yeApple, ukuthenga imveliso ngokuthe ngqo kwiVenkile yakho yeApple, nangona ungahlala uyi-odola kwi-Intanethi kwaye uyifumana kwiVenkile yakho oyithandayo yeApple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Landela iiVenkile ezihlaziyiweyo zeVenkile yeApple ngeNdlela yokuhlaziya
Ipeyinti kwaye uzobe ngaphandle kobunzima noPatina, ngoku uthengisa ixesha elincinci
I-Apple inomdla wokuthenga phantse i-3.000 yeemitha zesikwere edolophini yeReno